'कांग्रेसले मधेस नामको प्रदेश मान्दैन' - नेपाल समय
'कांग्रेसले मधेस नामको प्रदेश मान्दैन'
प्रदेश २ को राजधानी र नामाकरण विवाद थप पेचिलो बनेको छ। सरकारमा सहभागी संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राजपा नेपाल प्रदेश २ को नाम मधेस प्रदेश राख्ने पक्षमा देखिएका छन् भने दुई विपक्षी दल नेकपा र नेपाली कांग्रेस मिथिला–भोजपुराको अडान राखेका छन्।
राजधानीबारे विपक्षी दलहरुले जनकपुरलाई प्रस्ताव गरे पनि प्रदेश सरकरले यसबारे स्पष्ट दृष्टिकोण पेस गर्न सकेको छैन। सरकारले अबपनि विधेयक नल्याए विपक्षी कांग्रेसले आफै प्रदेशसभामा विधेयक ल्याउने चेतावनी पनि दिएको छ। यही प्रसंगमा प्रदेश २ का नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवसँग नेपाल समयका लागि धैर्यकान्त दत्तले गरेको सम्वाद :
तपाईहरुले प्रदेश सरकारको काम कारवाहीलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
प्रदेश सरकार केही दिनयता थोरै सक्रिय भएको देखिन्छ। पहिले यो निद्रामै थियो। द्रुत गतिमा हुनुपर्ने धेरै काम र बन्नुपर्ने कानुन अल्झिएका छन्। प्रदेश सरकार कछुवाको गतिमा हिंडदै छ । यसको परफरमेन्स जुन रुपमा हुनु पर्दथ्यो त्यो हामीले हेरेका छैनौं । र, खासगरी राजधानी, नामाकरण र भाषासम्बन्धी महत्वपूर्ण विधेयकहरु सुरुमै ल्याउनु पर्ने थियो । त्यो काम सरकारले गर्न सकिरहेको छैन।
बारम्बार हामीले भनेपनि सरकारले यसमा अग्रसरता देखाएन। यी विधेयक ल्याउन सरकार किन डराएको हो, हामीलाई थाह भएन । यस विधेयकका विषयमा दलका नेताहरुसँग औपचारिक कुराकानी गर्नपनि हामीले मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेका हौं । कुराकानीबाट कुनै विकल्प निस्कन सक्छ । तर उहाँहरुले मान्नु भएको छैन । उहाँहरु भन्नु हुन्छ मधेस प्रदेश, हामी भन्दै छौं मिथिला भोजपुरा प्रदेश । यस विषयमा दलका नेताहरुसँग सुरुमै कुरा गर्नुपर्ने थियो । सरकारले यसो गर्न सकेको छैन । यो सरकारको परफरमेन्स मेरो विचारमा राम्रो छैन।
सरकार नामाकरण, राजधानी र भाषासम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउन डराएकै हो त ?
सरकारले डराएरै यी प्रस्ताव ल्याउन नसकेको जस्तो हामीलाई लागेको छ । किनभने दुईटा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपाको जायज तर्क छ प्रदेशको नाम मिथिला भोजपुरा हुनुपर्ने, भाषा मैथिली हुनुपर्ने र राजधानी जनकपुर हुनुपर्ने । यस प्रस्तावमा दुईटा पार्टीको एकमत छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएर पनि सोझै मधेस प्रदेश भन्नु र मधेस प्रदेशको कार्ड खोल्नु केटाकेटीको व्यवहार जस्तो हो ।
मुख्यमन्त्रीको हैसियतले त्यो कार्ड खोल्नु हुँदैनथ्यो । त्यो कार्ड राख्नु पर्दथ्यो र दलका नेताहरुसँग छलफल गरेर मात्रै प्रस्ताव ल्याउनु पर्दथ्यो । मैले सुने अनुसार छिट्टै प्रस्ताव ल्याउने कुरा गर्नु भएको छ । प्रस्ताव ल्याउनु राम्रो कुरा हो । तर मधेस प्रदेशको प्रस्ताव ल्याए सदनमा प्रतिफल के हुन्छ त्यसको जिम्मेवारी सरकारको हुनेछ ।
तीन पटकसम्म मधेसकै नाउँमा आन्दोलन भएको हो । प्रदेशको नामाकरण मधेस गर्नु कसरी गलत भयो ?
उहाँहरुले सुरुदेखि एक मधेस स्वायत्त प्रदेशको अडान लिएर आन्दोलन गर्नु भयो । मधेसका २२ जिल्लाको एउटा स्वायत्त प्रदेश बनाउनुपर्ने उहाँहरुको अडान थियो । आफ्नो अडानमा कायम नभएर उहाँहरुले जनतालाई धोका दिनु भएको छ । यो दुईटा एजेन्डा बोकेर आम मधेसी जनता आन्दोलनमा होमिए । सहीद भए । हजारौं मधेसी जनता घाइते भए । यसको सोझो कुरो के छ भने उहाँहरु मधेसी जनतालाई ठगी रहनु भएको छ । न त एक मधेस भयो न स्वायत्त प्रदेश भएको छ । किनभने सबभन्दा कम अधिकार प्रदेशलाई छ । अधिकार त केन्द्र र स्थानीय तहमामात्र सीमित भएको छ । तसर्थ सिधा कुरा के हो भने मधेसी दलको सरकार जनतालाई ठगिरहेको छ ।
सरकारलाई यो प्रस्ताव ल्याउनैपर्छ । सरकारले जनकपुरबाहेक अन्य कुनै प्रस्ताव ल्याए पारित हुँदैन् । अन्य स्थानको प्रस्ताव सरकारले ल्याए फेल हुने निश्चित छ ।
स्वायत्त मधेस प्रदेश नपाएपछि उहाँहरु चुनावमा किन भाग लिनु भयो?
माग पुरा नहुन्जेल स्ट्याण्डमा बस्न सक्नु पर्दथ्यो। सहीदको सपना विपरित उहाँहरु केन्द्रीय र प्रदेश सत्तामा पुग्नु भएको छ । मधेसी दलहरु सत्ता र भत्तामा लिप्त भएका छन् । मधेसी जनताको अधिकारसँग सरोकार भएको भए यी दुई एजेन्डा पुरा नभएसम्म आन्दोलन गर्नुपर्दथ्यो ।
त्यसो भए नेपाली कांग्रेसले के भूमिका खेल्यो र ?
नेपाली कांग्रेस अहिले पनि ती कुराहरु हाउसमा उठाउँदै आइरहेको छ । हामी जिम्मेवार प्रतिपक्षको नाताले सरकारको राम्रो काममा सहयोग गर्छौं र जनता विरोधी कामको विरोध गर्दै आइरहेका छौं । सरकारको गलत कामकारवाहीको हामी विरोध गरेका छौं । सरकारले आफै गरेको कमिटमेन्ट पुरा नगरेपछि हामीले अस्तिमात्र सदन अवरुद्ध गर्‍यौं । मुद्दा अनुसार सहयोग र विरोधको नीति लिएर हामी अगाडी बढ्दै छौं ।
सरकारले ल्याएको प्रहरी भर्ना विधेयक प्रदेशको अधिकारसँग जुडेको विषय रहेकोले हामीले पारित गराउन सरकारलाई सहयोग गरेका छौं । केन्द्रीय सत्तामा रहेको नेकपा संघीयता डिफ्युज गराउने धेयले प्रदेश प्रहरी ऐनको विरोध गरेको छ । संविधानमा भएको अधिकार प्रयोग गर्ने कि नगर्ने ? प्रदेशको आफ्नै प्रहरी हुने संविधानमा उल्लेख छ । यो विधेयक पारित हुने बित्तिक्कै नेकपा र काठमाडौंमा किन खैलाबैला ? प्रदेशलाई अधिकार नदिएर जनतामाझ वितृष्णा फैलाई नेकपा संघीयता समाप्त पार्ने खेलमा लागेको छ ।
के तर्कका अधारमा प्रदेशको नामाकरण मिथिला नै हुनुपर्ने तँपाईहरु भन्दै हुनुहुन्छ ?
मधेस आन्दोलन पहिचानको लागि भएको हो । पहिचानका पाँचवटा आधारहरु छन्। भाषा, भेषभुषा, संस्कृति, भौगोलिक अवस्थिति र ऐतिहासिक निरन्तरता पहिचानका पाँच आधारहरु हुन् । यसमा हेर्ने हो भने मैथिली सबैभन्दा पुरानो र समृद्ध भाषा हो । यो भाषाको इतिहास पाँच हजार वर्ष पुरानो छ। राजा जनकको राजधानी पनि यहिँ थियो । मिथिलाका साथसाथै भोजपुरा पनि एउटा संस्कृति हो ।
उसको आफ्नो भाषा, संस्कृति र परम्परा छ । त्यसैले हामी भनिरहेका छौं मिथिला भोजपुरा यस प्रदेशको नाम हुनु पर्दछ । भण्डै ४५ प्रतिशत मैथिली भाषी रहेकोले यहाँको भाषा मैथिली हुनुपर्ने हामीले प्रस्ताव राखेका छौं । यसैगरी राजधानीको सवालमा जनकपुर सबैलाई पायक पर्ने स्थान हो । पूर्वाधारको हिसाबले पनि जनकपुर विकसित हुँदै छ । पूर्वाधारकै कुरा गर्ने हो भने जनकपुर जति पूर्वाधार प्रदेशको अन्य कुनै स्थानमा छैन् । यसकारण राजधानी जनकपुर बन्नु पर्छ हामीले भनेका छौं ।
सरकारले जनकपुर राजधानीको प्रस्ताव ल्याउनेमा तँपाई कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
मुख्यमन्त्रीज्यू बाराको भएकोले पनि जनकपुरलाई नै राजधानी बनाउने प्रस्ताव ल्याउन डराइरहनु होला ।तर राजनीतिमा डराएर भाग्न सकिँदैन । उहाँले के प्रस्ताव ल्याउने हो, छिटो ल्याउनु पर्‍यो ।सरकारले जनकपुरबाहेक अन्य कुनै प्रस्ताव ल्याए पारित हुँदैन, त्यो निश्चित रुपमा फेल हुन्छ। सरकारले राजधानीको प्रस्ताव नल्याए अस्थायी राजधानी जनकपुर त छँदैछ ।
अस्थायी राजधानीको भरमा कति दिन बस्नु हुन्छ ?
अस्थायी राजधानीको भरमा रहनु ठिक कुरो होइन । किनभने कुनै उद्योगपति लगानी गर्न विश्वस्त हुन सक्दैन् । राजधानीबारे आश्वस्त नभएसम्म उद्योगपतिहरु लगानी गर्न चाहँदैनन् । लगानी भित्र्याउन नसके समृद्ध र विकसित प्रदेश बनाउने सरकारको नारा कुरामा मात्रै सीमित हुनेछ ।
आठ महिना बितिसक्यो सरकारले राजधानी र नामाकरणको प्रस्ताव ल्याउन सकेको छैन् । अब पनि सरकारले यो प्रस्ताव नल्याए सदनमा तँपाईहरुको भूमिका कस्तो हुनेछ ?
सरकारले प्रस्ताव ल्याउँछ भनेर हामी आठ महिना कुरेर बस्यौं । सरकारले राजधानी र नामाकरण जस्तो महत्पूर्ण विधेयक अझै ल्याउन सकेको छैन् । तर अब धेरै कुर्ने अवस्था छैन् । दुई नम्बरको ट्याग हटाउन नामाकरण, लगानी भित्र्याउन स्थायी राजधानीजस्तो प्रस्ताव जरुरी छ ।
सरकारले यी प्रस्तावहरु यथाशीघ्र नल्याए हामीलाई पनि विधेयक ल्याउने अधिकार प्राप्त छ । सरकारले प्रस्ताव ल्याउन अबपनि ढिलाइ गरे अर्को विपक्षी दल नेकपासँग छलफल गरेर हामी आफै पनि प्रस्ताव ल्याउन सोच बनाउँदै छौं । यसबारे नेकपासँग अनौपचारिक कुराकानी भइसकेको छ । सरकारले नल्याए हामी प्रस्ताव ल्याउन बाध्य हुने छौं ।
सरकारले त नामाकरणको सवालमा मधेस प्रदेश करिब करिव स्पष्ट गरिसकेको छ नि ?
सरकारले भन्दैमा केही हुँदैन । सरकारले पनि संवैधानिक व्यवस्था र प्रावधान मान्नैपर्ने हुन्छ । राजधानी, नामाकरण र भाषासम्बन्धी प्रस्ताव पारित गराउन दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । सरकारले आफ्नो जिद्दी नछोडे सदनमा प्रस्ताव पारित हुँदैन् । प्रस्ताव ल्याने सरकारको दायित्व हो । तर उ आफ्नो दायित्वबाट पन्छिदैछ ।
प्रदेश सरकारका एकजना मन्त्रीलेनै प्रदेशको भाषा मैथिली नभएर मगही हो भनिसकेका छन नि ?
भाषाको ज्ञान हुनु पर्दछ । हामी व्याकरण पढेका छौं । तत्सम्, तदभव, आगन्तुक र प्राकृतिकजस्ता शब्दहरु हुन्छन् । मैथिलीमा केहि आगन्तुक भएपनि अधिकांश तत्सम् र तदभव् शब्दहरु छन् । र, यो यहाँको अरिजनल भाषा हो । तर, मगहीमा धेरै आगन्तुक शब्द प्रयोग भएको छ । मगहीमा केहि मैथिली र केही भोजपुरीबाट आएका शब्दहरु छन् भने केहि मगधबाट आएको हुन सक्छ । तर अरिजनल यसको आफ्नो शब्द छैन्।
मैथिलीमा प्राकृतिक शब्दहरु पनि पर्याप्त छन् । मगहीलाई अरिजनल भाषा मान्न सकिंदैन। कतिपयले नबुझेर मगही भाषाको वकालत गरिरहेका छन् । यहाँका ब्राम्हण, कायस्थ, भूमिहार जातको मैथिली भाषा रहेको भनि गलत अपवाह फैलाउने काम भएको छ। तर मैथिली यहाँ बस्ने सबैको भाषा हो भनेर बुझ्नु पर्‍यो ।
म त यी चार जात मध्ये कुनैमा पर्दिन । तर म मैथिली भाषी छु । यहाँका हरेक व्यक्तिले बोल्ने भाषा मैथिली हो । हरेक तीन कोशमा भाषा बदलिने हुने भएकाले ठाउँ अनुसार मैथिली बोल्ने तरिका मात्रै फरक भएको हो । ठाउँ अनुसार नेपाली भाषा बोल्ने शैलीपनि फरक हुन्छ। अनि त्यसलाई नेपाली भाषा नभन्ने त ? सरकारमा रहेका केही व्यक्तिहरुले मैथिलीलाई सीमित जातको कोल्टोमा राख्न खोजेका छन् । तर हामी त्यसो हुन्न दिन्नौं । हरेक मैथिली भाषाभाषीको भाषा मैथिली हो । र, रहन्छ पनि ।